Igbo Mass Readings November 17 2020, Tuezdee Izu Iri Atọ na Atọ Oge
Igbo Mass Readings November 17 2020, Tuezdee Izu Iri Atọ na Atọ n’Oge Adanyeghị n’Emume, Ncheta Elizabet nke Họngarị dị asọ.
1 IHE ỌGỤGỤ NKE MBỤ 3:1-6, 14-22.
2 ABỤỌMA NA AZỊZA: Ps. 15:2-3, 3-4, 5.
3 Mbeku II Tesa.2:14.
4 Oziọma maka November 17 2020 – Luk 19:1-10.
IHE ỌGỤGỤ NKE MBỤ 3:1-6, 14-22.
Degara Mmụọọma nke na-edu nzukọ Kristi nke dị na Sadis akwụkwọozi sị, Nke a bụ ozi nke onye ahụ nwere Mmụọ asaa nke Chineke na kpakpando asaa ahụna-ezi gị.
Ama m ọrụ gị na otu e si enwere gị dịka onye dị ndụ, mana n’eziokwu ị nwụrụ anwụ. Bilie, mee ka ihe fọdụrụ n’ime gị, nke na-anwụbeghị kwusie ike tupu ha anwụọ kpamkpam; n’ihina achọpụtala m na ọrụ gị ezubeghị oke n’ihu Chineke m.
N’ihi nke a cheta ozi ị natara na otu i siri nụ ya, mezuo ya ma chegharịkwaa. Ọ bụrụ na ị naghị eche nche, aga m abịakwute gị na mberede dịka onye ohi.
Ị gaghị amatakwa oge m ga-abịakwute gị. Mana i nwere naanị mmadụ olemole na Sadis ndị na-emetọbeghị onwe ha.
Ha ga-eyi uwe ọcha ha na-eso m, n’ihina ha tozuru etozu. Onye ọbụla nwetara mmeri ka a ga-eyikwasị uwe ọcha. Agaghị m ehichapụ aha ya n’Akwụkwọ nke ndụ; aga m ekwupụta aha ya n’ihu Nna m, ya na n’ihu ndị mmụọọma.
Onye nwere ntị, ya nụrụ ihe Mmụọ na-agwa nzukọ Kristi niile. Degara Mmụọọma ndị nzukọ Kristi dị na Laodishia akwụkwọozi si, Nke a bụ okwu nke onye ahụ bụ Amen, onye kwesịrị ntụkwasịobi, na-agbakwa akaebe eziokwu isi mbido nke ihe niile Chineke kere.
Amaara m ọrụ gị niile. I jụghị oyi nke ị na-ekpo ọkụ. Ọ gaara adị mma ma a sị na ị jụrụ oyi mọbụ na ị dị ọkụ! Ma ebe ị dị ñarañara, ị jụghị oyi nke ị na-ekpo ọkụ, aga m agbụpụ gị n’ọnụ m.
Ị na-akasị onwe gị obi sị, Abụ m ọgaranya, abakwara m ụba. Ọ dịghịkwa ihe ọbụla na-akpa m, ma ị maghị na ị nọ na nhụjuanya, i tosịrị imere ebere, ị dara ogbenye, i kpuru isi ma gbarakwa ọtọ.
N’ihi nke a, ana m adụ gị ọdụ ka i si n’aka m zuru ọlaedo a ñụchara n’ọkụ nke ọma, ka i wee baa ụba.
Zụrụkwa uwe ọcha kpuchie onwe gị ka aghara ịhụ mgbaramọtọ gị nke na-eweta ihere. Zụrụkwa ọgwụ tee n’anya gị ka i were na-ahụ ụzọ nke ọma.
Ndị m hụrụ n’anya ka m na-abara mba, na-atakwa ha ahụhụ n’ihi njọ ha. Ya mere, nweenụ ịnụ ọkụ n’obi, chegharịkwaa na mmehie ụnụ.
Lee eguzo m n’ọnụụzọ na-akụ aka. Ọ bụrụ na onye ọbụla anụ olu m meghee ụzọ, aga m abịakwute ya soro ya rie ihe.
Ya onwe ya ga-esokwa m rie nri. Onye ọbụla meririnụ, aga m enye ya ike isoro m nọdụ ala n’ocheeze m, dịka mụ onwe m si merie soro Nna m nọdụ ala n’ocheeza ya.
Onye nwere ntị, ya nụrụ ihe Mmụọ na-agwa nzukọ Kristi niile.
ABỤỌMA NA AZỊZA: Ps. 15:2-3, 3-4, 5.
Azịza: Onye ọbụla meririnụ aga m enye ya ike isoro m nọdụ ala n’ocheeze m.
1.Ọ bụ nwoke ahụ na-ebughị njọ ọbụla na ndụ ya,
onye na-eme ihe dị mma,
onye ji obi ya niile ekwu eziokwu.
Onye na-anaghị ekwutọ ndịọzọ. Azịza.
2. Onye anaghị eme onye agbataobi ya ihe ọjọọ;
Mọbụ bo ya ebubo asị.
Onye na-eleda ndị amaghị Chineke anya
ma na-enye ndị na-atụ Yahweh egwu nsọpụrụ. Azịza.
3. Onye na-ebinye ego n’anaghị ọmụrụ nwa,
onye anaghị eri ngarị iji megide onye enweghị ihe ọjọọ o mere.
Ọ bụrụ na mmadụ e mee ihe ndị a
O nweghị ihe ọbụla ga-eme ka egwu tụọ ya. Azịza.
Mbeku II Tesa.2:14.
Site n’oziọma, Chineke kpọrọ anyị ka anyị wee nweta otito nke Dinwenụ anyị Jesu Kristi.
Oziọma maka November 17 2020 – Luk 19:1-10.
Jesu banyere na Jeriko, na-achọ isi na ya gaa ebe ọzọ. Ma o nwere otu nwoke a na-akpọ Zacchaeus; nwoke a bụkwa onyeisi ọnaụtụ na nnukwu ọgaranya.
Ọ chọrọ ịhụ ma mata onye Jesu bụ. Mana o nweghị ike ime nke a n’ihi igwe mmadụ, maka na ọ dị mkpụmkpụ.
Nke a mere o jig baa ọsọ gaa n’ihu, rịgoro otu osisi a na-akpọ Sikamọ, ka o wee nwee ike ịhụ Jesu, maka na ọ ga-esi n’ụzọ ahụ gafee.
Mgbe Jesu bịaruru n’ebe ahụ, o leliri anya elu, hụ Zacchaeus sị ya, “Zacchaeus! Mee ngwa rịdata, n’ihi na aga m anọ n’ụlọ gị taa!”
O mekwara ngwangwa rịdata, were ọñụ nabata Jesu. Mgbe ndị mmadụ hụrụ nke a, ha niile tamuru ntamu sị: “Ọ banyela ịbụ onye ọbịa n’ụlọ onye omenjọ.
Zacchaeus guzooro, gwa Onyenweanyị sị: “Lee Onyenwe m, Aga m enye ndị ogbenye ọkara ihe niile n nwere.
Ọ bụrụkwa na o nweela onye m naara ihe ya n’ụzọ aghụghọ, aga m akwụghachị ya ugboro anọ.”
Jesu gwara ya sị, ‘Nzọpụta abịaruola n’ụlọ a taa, n’ihina ọ bụkwazi nwa nke Abraham. N’ihina Nwa nke Mmadụ ahụ bịara ịchọpụta ma zọpụtakwa ndị furu efu.”
IHE ỌGỤGỤ ỤNYAHỤ: Igbo Mass Readings November 16 2020, Mọndee Izu Iri Atọ na Atọ n’Oge Adanyeghị n’Emume.
IHE ỌGỤGỤ ECHI: Igbo Mass Readings November 18 2020, Wednezdee Izu Iri Atọ na Atọ n’Oge Adanyeghị n’Emume.
Igbo Mass Readings November 16 2020, Mọndee Izu Iri Atọ na Atọ Oge
Igbo Mass Readings November 18 2020, Wednezde Izu Iri Atọ na Atọ Oge
Igbo Mass Readings for December 25 2021, Uka Uzo Ututu
Read More Igbo Mass Readings for December 25 2021, Uka Uzo UtutuContinue
Igbo Readings for Ncheta Pita na Pol Di Aso, Vigil, June 28, 2020
Bylectionary	 July 2, 2020 July 3, 2020
Read More Igbo Readings for Ncheta Pita na Pol Di Aso, Vigil, June 28, 2020Continue
Igbo Mass Readings October 30 2020 Fraịdee Izu Iri Atọ n’Oge Nkiti
Bylectionary	 December 18, 2020 December 19, 2020
Read More Igbo Mass Readings October 30 2020 Fraịdee Izu Iri Atọ n’Oge NkitiContinue
Igbo Mass Readings November 10 2020, Ncheta Leo Dị Asọ
Bylectionary	 January 2, 2021 January 2, 2021
Read More Igbo Mass Readings November 10 2020, Ncheta Leo Dị AsọContinue
Igbo Readings for June 22, 2020, Mondee
Bylectionary	 June 17, 2020 July 9, 2020
Read More Igbo Readings for June 22, 2020, MondeeContinue
Igbo Readings for June 18, 2020, Toozdee
Bylectionary	 June 10, 2020 July 9, 2020
Read More Igbo Readings for June 18, 2020, ToozdeeContinue